Nooca Twitter Faux Pas | Martech Zone
Nooca Twitter Faux Pas
Monday, August 24, 2009 Axad, Agoosto 2, 2015 Adam Yar
Waxaa jira ninkan barta Twitter ka oo raaca oo i soo raaca waxa u muuqda toddobaadle. Waxaan u maleynayaa inuu rumeysan yahay inaan si lama filaan ah u raaci doono isaga (maadaama aanan helin 27 jeer ee ugu dambeysay ee uu isku dayay.). Waa inuu qiyaasayaa inaan xisaabteyda akoonkeyga ama inaan ahay ido gujin doona raac qof kasta oo i soo raaca.
Kama aanan raacin markii ugu horeysay maxaa yeelay waxaan eegay waqtigiisa mana arag wax qiimo toos ah iigu fadhiya. Maaha inuu isagu wax xun sheegayay ama inuu riixayo galmada. Anigu kaliya dan kama lihi sheyga uu hawkiga ku jiro, isagu ma joogo goobtayda, ma dhahayo wax aan xiisaynayo oo fog, mana aha qof maxalli ah - dhammaan shuruudaha aan u adeegsado go'aaminta haddii aan raacayo iyo in kale qof ama maya. (Uma baahnid inaad buuxiso dhammaan shuruudaha; mid keliya.)
Ma haysto lambarrada la raacayo ee waaweyn, laakiin markaa waa maxay? Ma doonayo lambarro badan maxaa yeelay waa qabow. Sikastaba, ilaa hada waan iska indha tiray ninka. Qorshaha oo dhan waxyaaba runti waa uun xanaaq yar sida kan kaneecada oo ka soo muuqday barbeque-ga. Laakiin taasi waa wax - Waxaan bilaabay inaan u arko ninkaan wax kale oo kaneeco mooyee.
Dhab ahaantii, isagu waa dhaawaca sumadiisa shaqsi oo aad moodo inuu quus ka muuqdo dabintiisa. Intii aan markii horeba u arkayay inuu yahay ganacsade sharci ah oo leh badeecad hufan oo aan aniga uun i xiisaynayn, haddana waxaan u arkaa inuu yahay dugaag wax cuno oo aan weligay naf kula talin doonin.
Hadda oo aan ku hadaaqay, aan ku weydiiyo su’aal, aqriste. Haddii aad ka go'an tahay inaad u isticmaasho Twitter xeelad dhisme calaamadeysan, dabeecado noocee ah ayaad aamminsan tahay inay waxyeello u geysan karaan astaantaada?
Cusbooneysiin: Kahor intaanan fursad u helin inaan daabaco qoraalkan, adeegsadaha Twitter-ka ee su'aasha laga qabo waa inuu arkay qoraalkayga Tweets ee ku saabsan isaga. Wuu xanibay me. Waxaan ahay kaliya maaweelo
Tags: akhlaaq xumo twitterKhalad twittertwitter raackhaladaadka twitterka
Kalluumeysiga Malaayiin Milyan